I-Wiko View 3 Lite: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
Ukujonga kwe-Wiko 3 Lite: Ifowuni entsha kraca
UWiko usishiyile ngeemodeli ezininzi kuluhlu lwazo lokujonga kulo nyaka. Kutshanje inkampani ibonakalisile ngokusemthethweni Umbono 3 kunye nokuJonga i-3 Pro, njengoko besesitshilo. Olu luhlu ngoku lugqityiwe nge-smartphone yalo entsha, esele ihanjisiwe. Imalunga neWiko View 3 Lite. Njengoko sinokuqonda kwigama layo, yeyona modeli ilula kolu luhlu ukuza kuthi ga ngoku.
Nangona le Wiko View 3 Lite igcina izinto ezininzi esele sizibonile kwezinye iifowuni. Kuza nescreen esinotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi kuyilo lwayo. Ubhejo olutsha oluvela kwifransi yaseFrance kuludwe lokungena. Yintoni esinokuyilindela kwifowuni?
Ngaphandle kokufika ngaphakathi kuluhlu lokufaka, ifowuni ivula ikhamera yangemva emibini. Ngale ndlela, ilandela umgca esiwubonileyo kwezinye iimodeli ezimbini ezithe zashiywa yifemu kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ukubheja kwenkampani ukubonisa ukuba uluhlu lokufaka lunokunika into enomdla.
Wiko Y80: Uluhlu olutsha lokungena kunye neekhamera ezimbini
1 Iinkcukacha zeWiko View 3 Lite
Iinkcukacha zeWiko View 3 Lite
Nangona sele inikiwe, Kukho ezinye iinkcukacha malunga nale Wiko View 3 Lite ekufuneka iqinisekisiwe. Kodwa ngedatha esinayo ukuza kuthi ga ngoku kwifowuni sinokufumana umbono ocacileyo wento esinokuyilindela. Uyilo, njengoko sele sibonile, luyafana nezinye iifowuni zorhwebo ukuza kuthi ga kolu luhlu lwe-View 3. Ezi yinkcazo esaziyo ukuza kuthi ga ngoku:
Isikrini: 6,09 intshi IPS ngesisombululo se-HD +
Inkqubo: I-Octa-Core Cortex-A55
I-RAM: 2 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi: 32 GB
Ikhamera esemva: 13 MP + 2 MP
Ikhamera yangaphambili: Ukuqinisekiswa kwesisombululo sayo
Ibhetri: 4000 mAh
Ukunxibelelana: iBluetooth, 4G, iSIM, iGPS, iWiFi 802.11 a /
Ifowuni iyothusa ngemiba eliqela, kuba ifika nescreen esingaphezu kweesentimitha ezi-6 ngobukhulu. Into engaqhelekanga kolu luhlu lweemarike, apho sihlala sifumana ii-smartphones ezincinci. Kodwa umenzi waseFrance ufuna ukulandela imeko yangoku kwi-Android, apho sineefowuni ezinezikrini ezinkulu. Ke sifumana i-intshi ye-6.09 kule meko, ekwanesisombululo se-HD +.
Ukuzimela kuya kuba sesinye sezitshixo kule Wiko View 3 Lite, ubuncinci ngokomenzi wayo uqobo. Ifowuni iza nebhetri yomthamo we-4.000 mAh, enobungakanani obuloluhlu. Njengoko inkampani ivakalisile, le bhetri Iyakwazi ukuqinisekisa iintsuku ezimbini zokuzimela. Ke silindele ukusebenza kakuhle kuyo. Ngaphakathi kusetyenziswa iprosesa ye-Octa-Core Cortex-A55, eza ne-2 GB ye-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi kwe-32 GB. Akubonakali ngathi kuyakwandiswa ukugcina ologcino.
Okokugqibela, iikhamera yenye yezinto eziphambili kule fowuni. Kuza kunye ne-sensor ephindwe kabini kule meko, kunye ne-13 MP ephambili kunye ne-2 MP yesibini. Le sensor yesibini isetyenziselwa ukubonelela ngobunzulu obukhulu kwiifoto ngalo lonke ixesha. Sikwanemodi yobukrelekrele bokufakelwa kwiikhamera. Ngombulelo kuyo, kuya kuba nakho ukwandisa imifanekiso ukuya kuthi ga ngoku kwaye ngaloo ndlela ufumane eyona mfanekiso mhle.
Sihlalutya i-Wiko View 2 Go, ingxelo enexabiso eliphantsi kwiscreen sonke
Le Wiko View 3 Lite izokwaziswa ngemibala emibini, EziliBlue Blue kunye neBlush Gold. Nangona kwiifoto ukuza kuthi ga ngoku kuphela kwifowuni ebonisiweyo kule toni yegolide. Sikwafumana ubumbeko olunye lwefowuni ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi, okuyi-2/32 GB, njengoko sibonile kwinkcazo yayo.
Ngelishwa, okwangoku asinayo Akukho lwazi malunga nexabiso eliya kuba nalo le Wiko View 3 Lite ekuqalisweni kwayo kwintengiso. Asazi nokuba izakuqala nini ukuthengiswa. Inkampani ithe izakukhupha le datha kungekudala. Ke ngumbandela wokulinda ixesha elide ukufumana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ukujonga kwe-Wiko 3 Lite: Ifowuni entsha kraca
I-ZTE Blade A5 2019: Uluhlu olutsha lwentengiso
I-Galaxy M10, M20 kunye neM30 kungekudala ziya kuba nePie ye-Android